အသက်မပြည့်သူလေးကို မော်ဒယ်လုပ်ရန်အတွက် ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်ပြီး သားမယားပြုကျင့်ကာအွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ဝေသူတို့ကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ – စွယ်စုံသုတ
အသက်မပြည့်သူလေးကို မော်ဒယ်လုပ်ရန်အတွက် အယုံသွင်း ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်ပြီး သားမယားပြုကျင့်ကာအွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ဝေသူတို့ကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ၁၀.၁.၂၀၂၁ရက် ည ၉နာရီခွဲအချိန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ မြိတ်မြို့မရဲစခန်းတွင် ဒုရဲမှုးချိုလွင် စခန်းမှုးတာ၀န်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဒေါ်…..(၅၄)နှစ်၊ရောင်း၀ယ်၊ ……လမ်း၊ ……ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့နေသူက၂၆.၁၂.၂၀၂၀ရက် နံနက် ၁၀နာရီအချိန် နေအိမ်တွင် သမီးဖြစ်သူမ…..(၁၄)နှစ်၊
ဆိုင်၏အလုပ်သမားဖြစ်သောမ….(၂၀)နှစ် တို့နှင့်အတူ နေအိမ်၌ရှိနေစဉ်မ……(၂၀)နှစ်နှင့် လွန်ခဲ့သော(၁)လခန့်က ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော ပုလောမြို့တွင် နေထိုင်သူ မင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့သည် ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက် တစ်စီးစီဖြင့် နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာကာတရားလို၏ သမီးဖြစ်သူမ……..အား မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်
တစ်ခါရိုက်လျှင် ရိုက်ကူးခအဖြစ် ငွေ(၅၀၀၀၀)ကျပ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် တရားလိုလည်း သမီးဖြစ်သူမ……. မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် အဖော် အဖြစ်မ…… (၂၀)နှစ်ကိုပါ ထည့်ပေးပြီး မင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့မှ ဆိုင်ကယ်(၁ )စီး ၎င်းတို့(၂)ဦးလာသော ဆိုင်ကယ်(၂)စီးအနက် တစ်စီးအားမ…..(၂၀)နှစ်မှ မောင်းကာ တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူသည်
အနောက်မှ ထိုင်လိုက်ပါလျက် တရားလို၏ နေအိမ်မှ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ထွက်သွားပြီးနောက် ၂၆.၁၂.၂၀၂၀ရက် ညနေ ၃နာရီ အချိန်ခန့်မ……နှင့်အတူ တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူ မ……တို့သည် မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့်တို့နှင့်အတူ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမ…….(၂၀)နှစ်မှနေ၍ တရားလိုအား (၅၀၀၀၀)ကျပ် ပေးအပ်ခဲ့ကာ မင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့လည်းတရားလို၏ နေအိမ်ရှေ့မှ ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပြန်သွားပြီးနောက် အနေအထိုင်မပျက် ပုံမှန်နေလျက်ရှိရာမှ ၉.၁.၂၀၂၁ရက် ည၇နာရီ အချိန်ခန့်တွင် နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော တရားလို၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဒေါ်……မှနေ၍ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တရားလို၏သမီးနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးတို့ ဟိုတယ်တစ်ခု၌ လိင်ဆက်ဆံနေသည့် Vidoဖိုင် (၂)ဖိုင်အား တွေ့မြင်ရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် တရားလိုလည်း နေအိမ်အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းထဲတွင် ရှိနေသော သမီးဖြစ်သူမ….. ထံသို့သွားရောက်ကာ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊
တရားလိုမှနေ၍မ…..(၂၀)နှစ်နှင့် မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံသွားရိုက်စဉ်က ဖြစ်ခဲ့တာလား ဟု မေးမြန်းရာ သမီးဖြစ်သူမ……..မှ ဖြစ်စဉ် မှန်ကန်ကြောင်း နှင့်၂၆.၁၂.၂၀၂၀ရက် နံနက် ၁၀နာရီအချိန်ခန့်က ပုလောမြို့မှ မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် လာခေါ်သောမင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့် အိမ်ရှိ အလုပ်သမားမ……(၂၀)နှစ် တို့နှင့်အတူ လိုက်သွားစဉ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
အစပိုင်း၌ မြိတ်မြို့၊ မြစ်ငယ်ရပ်ကွက်ရှိ ရေကန်ဘောင်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရေကန်ဘောင်တွင် ဓါတ်ပုံဆရာ ကိုထက်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မိုးရွလာသောကြောင့် တရားလို၏ သမီးနှင့်အတူ အလုပ်သမားမ…..အား ခေါ်ဆောင်လျက် မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့် မြိတ်မြို့၊ ထားဝယ်စုရပ်ကွက်၊ ……ဟိုတယ်သို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊
ဟိုတယ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက် တရားလို၏ အလုပ်သမားမ…….မှာ ၄င်း၏သူငယ်ချင်းမှ ကိစ္စရှိ၍ ဖုန်းဆက်ခေါ်သဖြင့် ခဏသွားမည်ဟု ပြောဆိုကာ ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ဟိုတယ်တွင်တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူနှင့် မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့်၊ ဓါတ်ပုံဆရာ ကိုထက်တို့သာ ကျန်နေခဲ့ကြောင်း၊
ထိုသို့ ကျန်ရှိနေခဲ့စဉ် ဟိုတယ်ပထမထပ်ရှိ အခန်းနံပါတ်မမှတ်မိသို့ မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့်၊ ဓါတ်ပုံဆရာကိုထက်ဝင်းဖြိုး (ခ)ကိုထက် (၂၇)နှစ်၊ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်း၊ မ.၁၃၊စပါယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့နယ်နေသူမှ အခန်းအတွင်း ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခန်းထဲသို့ ရောက်သောအခါမင်းခန့်ထူး (၂၁)နှစ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ ငုရွှေဝါတိုးချဲ့လမ်း၊ အမှတ်( )ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့နယ်နေသူနှင့်
အေးချမ်းအောင် (ခ)အောင်မင်းခန့် (ခ)ကြက်ဥ (၂၈)နှစ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့နေသူ (၂)ဦးတို့မှ အပြင်သို့ထွက်သွား၍ အခန်းအတွင်းတွင် ဓါတ်ပုံဆရာကိုထက်နှင့် တရားလို၏သမီးဖြစ်သူမ…….တို့နှစ်ဦးသာ ကျန်ရှိနေခဲ့စဉ်
ကိုထက်မှ သမီးဖြစ်သူမ……၏ ပုခုံးအားဖက်သိုင်းပြီးနောက် မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်လား မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်ပါက ရာနှုန်းပြည့် ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ကြောင်း၊ အခကြေးငွေများလည်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
သဘောတူလက်ခံလား ဟု ပြောဆိုပြီး အတင်းဖက်ကာ သားမယားအဖြစ် (၂)ကြိမ်ကိုထက်က ပြုကျင့်ကာမင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ထိုင်ခုံ၌ ထိုင်နေခဲ့ကြကြောင်း၊ တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူဖုန်းဖြင့် ကိုထက်မှနေ၍ ဓါတ်ပုံနှင့် Videoရိုက်ခြင်း၊ မင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့မှလည်း ဓါတ်ပုံနှင့်Video များကို အပြန်အလှန်ရိုက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း
ပြောပြသိရှိရကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပြီး ၂၆.၁၂.၂၀၂၀ရက် ၁၂နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဟိုတယ်အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ထွက်၍ ဓါတ်ပုံဆရာ ကိုထက် မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့်တို့နှင့်အတူ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းတွင် ထိုင်စောင့်နေကာ (၁၅)မိနစ်ခန့် အကြာတွင်မ…..(၂၀)နှစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ပလောက်စုထမင်းဆိုင်သို့ သွားရောက် ထမင်းစားခဲ့ကြကြောင်း
ပြောပြသိရှိခဲ့ရသဖြင့် တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူ အသက် (၁၆)နှစ်အောက်အရွယ် မိန်းကလေးအား စည်းရုံးသွေးဆောင်ပြီး သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ဆက်ဆံခဲ့သူကိုထက်(မိ)နှင့် အားပေးကူညီဆောင်ရွက်သူ မင်းခန့်( မိ)နှင့် အောင်မင်းခန့်(မိ)တို့အား ဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန်
တရားလိုပြုလုပ်ကာ တိုင်တန်းခဲ့ရာ မြိတ်မြို့မရဲစခန်း အမှုကြီးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁)၊(ပ)၁၇/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၃/၃၇၆/၁၁၄ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမှုအား စခန်းမှူးဒုရဲမှူး ချိုလွင်က တရားလိုနှင့် သက်သေများအားအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး၏ အနီးကပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်အတူ) အမှုစစ်စခန်းမှုး ဒုရဲမှုးချိုလွင်၊ နယ်ထိန်းနယ်မြေတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကျွဲကူးစခန်း၊ ပုလာမြို့မရဲစခန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ သက်သေမ…..အား ဖုန်းဖြင့် အသွင်ယူချိတ်ဆက်ပြီး စုံစမ်းဖမ်းဆီးရာ၌
ဓါတ်ပုံဆရာကိုထက်အား ပုလောမြို့၌လည်းကောင်း၊ မင်းခန့်ထူးနှင့် အောင်မင်းခန့်တို့အား ကျွဲကူးတံတား၌လည်းကောင်း ဖမ်းဆီးရမိ၍ အမှုဖြင့်အသေးစိတ်စစ်ဆေးရန်၊ ဆောင်ရွက်ပြီး ကျူးလွန်ခံရသူအား ဆေးစာရေးသားပေးပို့ခြင်း၊ ကျူးလွန်သူများအား အမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးးစစ်ဆေးခဲ့ရာ အမှုမှတရားလိုနှင့် သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ
ကျူးလွန်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ ကိုထက်သည် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အွန်လိုင်းပညာကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ အခကြေးငွေ ရလိုမှုဖြင့် ၄င်း၏ တပည့်များဖြစ်သော မင်းခန့်နှင့်အောင်မင်းခန့်တို့အား မှတ်တမ်း Video များရိုက်စေကာ အွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ဝေပြီး အခကြေးငွေ ရရှိရန်အတွက် ကျူးလွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။